अमेरिकामाथि नेपालको जितका तीन आधार | Hamro Khelkud
अमेरिकामाथि नेपालको जितका तीन आधार
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – आईसीसी विश्वकप लिग २ त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले शनिवार अमेरिकालाई ३५ रनले पराजित गरेको छ । जुन नेपालको घरेलु मैदानमा पहिलो ओडीआई जित हो ।
टीयूको पिचमा पहिला ब्याटिङ गर्न कठिन मानिन्छ । नेपालले टस हारेर ब्याटिङ गर्नेक्रममा एक समय कमजोर अवस्थामा पुगको थियो । टस हार्नु नेपालको लागि सुरुवाती समय घातक बनेको थियो । एक समय ४९-५ को कमजोर अवस्थामा पुगेको नेपालले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै जित हात पार्न सफल भयो । नेपालका जितका तीन आधार यस प्रकार छन् ।
३. स्पिनरको उत्कृष्ट प्रर्दशन
१ सय ९१ रनको लक्ष्य पछ्याएको अमेरिकालाई नेपाली स्पिनरले धरासय बनाए । टीयूको पिच स्पिनर उपयोगि मानिन्छ । त्यसैको कारण कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले दोस्रो ओभरमै स्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई बलिङमा ल्याएका थिए । दोस्रो ओभरको चौथो बलमा सन्दीपले प्रमुख ब्याट्सम्यान आरोन जोन्सलाई ५ रनमा एलबिडब्लू आउट गर्दै पहिलो सफलता दिए । सन्दीपले चौथो ओभरको चौथो बलमा मोनक पटेललाई ४ रनमा एलबिडब्लू गराएपछि अमेरिका सुरुवाती समय संकटमा परेको थियो । खराब प्रर्दशन गरेको अमेरिका मध्यक्रम सुशन भारीले ध्वस्त बनाए । सुशनले अक्षय होमराजलाई ५, करिमा गोरलाई १० र क्यामरन स्टिभेन्सनलाई १९ रनमा आउट गर्दै सहज जित पक्का गरेका थिए ।
स्पिनरले कुनै पनि समय अमेरिका खेलाडीलाई खुलेर खेल्न दिएनन् । जसको कारण सामान्य लक्ष्यमा पनि नेपालको जित सम्भव बन्यो । सन्दीपले १० ओभरमा २ मेडन सहित २७ रन खर्चेर २ विकेट लिए । त्यस्तै सुशन भारीले १० ओभरमा १ मेडन राख्दै ४३ रन खर्चेर ३ विकेट लिए । डेब्यू खेल खेलका कुशलले १० ओभरमा १ मेडन सहित ३० रन खर्चेर १ विकेट लिए । सम्रगमा तीन स्पिनरले ३० ओभरमा १ सय रन खर्चेर ६ विकेट लिए । जुन जितको आधार बन्यो ।
२. विनोद र कुशलको साझेदारी
सुवास खकुरेल ३, ज्ञानेन्द्र मल्ल २१, पारस खड्का १९, दीपेन्द्र सिंह ऐरी शून्य र आरिफ शेख २ रनमा आउट हुँदा नेपाल २०.५ ओभरमा ४९-५ को कमजोर अवस्थामा पुगेको थियो । त्यो बेला नेपालको जित कमैले सोचेका थिए । तर छैटौं विकेटका लागि कुशल मल्ल र विनोद भण्डारीले ८४ रनको महत्वपूर्ण साझेदारी गर्दै नेपाललाई प्रतिस्पर्धात्मक योगफलतर्फ लम्काएका थिए ।
खराब सुरुवात गरेको नेपालको लागि कुशल र विनोदको साझेदारीनै जितको टनिङ प्वाइन्ट बन्न पुग्यो । कुशल ५१ बलमा ४ चौका र ३ छक्का सहित ५० रनमा क्याच आउट भए । विनोद भण्डारी ७९ बलमा ६ चौका र १ छक्का सहित ५९ रनको योगदान दिए । यी दुईको ब्याटिङलेनै नेपालको जितको आधार तय गर्यो ।
१. करणको उत्कृष्ट बलिङ
नेपालको प्रमुख जितको आधार तीव्र गतिका बलर करण केसीको उत्कृष्ट बलिङ हो । जित पक्का गर्न उत्कृष्ट सुरुवातको आवश्यकता देखिन्थ्यो । करणले तेस्रो ओभरमा प्रमुख दुई विकेट लिए । जसले अमेरिकालाई खेलमा फर्किने अवसर मिल्न सकेन । तेस्रो ओभरको स्टिभ टेलरलाई दीपेन्द्र सिंह ऐरीबाट शून्यमा आउट गरे । एक बलपछि नै करणले वेस्ट इन्डिजबाट टेष्ट, ओडीआई र टि ट्वान्टीको अनुभव बटुलेका जेभियर मार्शललाई विनोद भण्डारीबाट २ रनमा आउट गरे ।
स्पिनरले मध्यक्रम ध्वस्त बनाएका थिए । तर तल्लोक्रममा इयान होल्यान्डले जिम्मेवारी ब्याटिङ गर्दै अर्धशतकीय इनिङ खेलेपछि नाटकीय हारको डर बढ्न थालेको थियो । तर करण केसीले ४१ औं ओभरको चौथो बलमा होल्यान्डलाई ७५ बलमा विकेटकिपर विनोदबाट क्याच गराउँदै जित पक्का गराए । करणले रस्टी थेरनलाई ९ रनमा क्याच गराउँदै ३५ रनको जित पक्का गरेका थिए । समग्रमा करणले ७.१ ओभरमा १ मेडन सहित १५ रन खर्चेर ४ विकेट लिए । जितमा नायक बनेका करण म्यान अफ द म्याच चुनिए ।